Aaron Ramsey oo aan lagu darin shaxda xulka qaranka Wales u matalaya isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018 – Gool FM
Aaron Ramsey oo aan lagu darin shaxda xulka qaranka Wales u matalaya isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018
Haaruun August 24, 2016
(Wales) 24 Agoosto 2016 – Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal Aaron Ramsey ayaan ku jirin shaxda xulka qaranka Wales u matalaya isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018 oo ay bisha dambe la ciyaari doonaan Moldova.
25-sano jirkaan ayaa dhaawac muruqa ahi soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii ay kooxdiisa Gunners guuldarro 4-3 kala kulantay Liverpool, todobaadkii furitaanka ee horyaalka Premier League.
Natiijadaas ayaa ka dhigtay in Ramsey laga tago oo aan lagu darin shaxda uu magacaabay tababare Chris Coleman, sidoo kale waxaa isna dhaawac looga tagay oo aan shaxda Wales lagu darin laacibka khadka dhexe ee kooxda Crystal Palace Jonny Williams.
Waxaa xulka Wales boos ka helay oo loo yeeray xiddigaha Emyr Huws, Tom Lawrence iyo Paul Dummett kuwaasoo seegay tartankii qarammada Yurub ee EURO 2016 oo ay xulka Wales ku dhammaysteen afar dhammaadka tartankaas.
Xiddiga Real Madrid ee Gareth Bale ayaa hoggaaminaya 23-ka ciyaaryahan ee shaxda Wales u wakiilatay inay isreeb-reebka koobka Adduunka 2018 kula ciyaaraan xulka Moldova Cardiff City Stadium 05 bisha September ee soo aaddan.
A dyma’r garfan fydd yn wynebu Moldova… #TogetherStronger pic.twitter.com/EtvLDm0Ufa
— FA Wales (@FAWales) August 24, 2016
Zlatan Ibrahimovic oo kulanka soo socda gaari kara rikoodh 91-sano u yiilay Man United…(Muxuu yahay?)
Luis Enrique oo qarka u saaran inuu jabiyo rikoor uu horay u dhigay Pep Guardiola